I-50 YEENDLELA EZIPHAKATHI EZILUNGILEYO ZOKULUNGISELELA AMADODA (ISIKHOKELO SE-2021) - IINWELE ZAMADODA
Eyona Iinwele Zamadoda I-50 yeendlela eziPhakathi eziBalaseleyo zeNdlela yokuLungisa amadoda
Xa kuziwa ekusikeni kwesitayile kunye nezitayile zamadoda, iinwele ezinde eziphakathi ibe yinto ethandwayo kule minyaka idlulileyo. Esefashonini kunye nefashoni, iinwele ezide ezinokuphakama zingaqala ukusuka…
Xa kuziwa ekusikeni kwesitayile kunye nezitayile zamadoda, iinwele ezinde eziphakathi ibe yinto ethandwayo kule minyaka idlulileyo. Imfashini kunye nefashoni, ubude beenwele eziphakathi bunokuhluka ukusuka kwimbonakalo yakudala ukuya kwizitayile zangoku. Ukusuka kwibhrashi epholileyo engenzame ukubuyela kwindawo egudileyo embindini kunye nekama elibalekayo ngaphezulu, uninzi lweenwele eziphakathi zilondolozwa kancinci kwaye zijongeka zilungile. Ngelixa ubude obuphakathi buchazwa ngokubanzi njengeenwele ezi-intshi ezi-4 ubuncinci, abafana banokukhetha ukusuka kufutshane ukuya kuthi ga kwiinwele ezinde eziphakathi ukufezekisa ubude obugqibeleleyo besitayile abasifunayo. Unokukhetha iinwele eziphakathi kuyo yonke indawo ujonge ulutsha okanye ufuna ukuphela okanye ukusika emacaleni ngeenwele ezinde ngaphezulu. Ukukukhuthaza ngezimvo kunye nokukhethwa kwesitayile, siqulunqe uluhlu lweyona ndawo ilungileyo yokuhombisa iinwele zamadoda ukufumana ngoku. Nokuba uneenwele ezigobileyo, ezi-wavy, ezingqindilili, okanye ezithe tse, phonononga ezi nwele zithambileyo zobude obuphakathi ukufumana amadoda angenamda.
1Uhlobo lweeHirstyle eziPhakathi
1.14Iinwele eziDibeneyo eziPhakathi
1.15Iinwele eziPhakathi eziLungileyo
MbiniAmadoda aBude obuPhakathi beenwele
Uhlobo lweeHirstyle eziPhakathi
I-Sleek kwaye intle, ukuhamba kwe-broar kuyinto ethandekayo yenwele yamadoda aneenwele eziphakathi. Ukuhlanjwa umva ngokukhululekileyo, le ndlela inesitayile imalunga nokwandisa ivolumu kunye nomzimba ngenkangeleko ekhululekile. Ukufezekisa iinwele ezomeleleyo ezithe nkqo, ukujonga kulula njengokuvumela iinwele zakho zixhomekeke ngokwendalo kwaye uzifake ngasemva kweendlebe zakho ukuze zingabikho ebusweni bakho.
Ezi ntlobo zokusika zilungile ukuba uqala ukukhulisa iinwele zakho kwaye kufuneka usike rhoqo ukunqanda ukuphela kwesahlulo. Nokuba ubeka isitayile esiphakathi okanye usidibanise kwelinye icala, sebenzisa imveliso yokukhanya yesitayile efana ne-wax yokugqiba kwendalo.
Isitayile kwaye ipholile, i-quiff yifashoni yamadoda ekhangeleka ishushu ngeenwele ezinde. Idityaniswe namacala acoliweyo okanye angaphantsi okwahlukileyo, inwele ye-quiff iyafana nepompadour kwaye inika ivolumu kunye nentshukumo.
Ilungele abafana abaneenwele ezingqindilili, ungawususa umnqwazi ngekhilimu, i-wax, okanye udongwe ukuze ugqibe ukucoceka. Yenza ukubonakala kwe-iconic ngentloko epheleleyo yeenwele ngokwandisa ukuphakamisa ngaphambili.
Ukuqhushumba yindlela entsha yeenwele zamadoda eziye zayintandokazi kwindawo yokucheba iinwele. Ngokuqhelekileyo kwaye kumnandi, le nwele ikunika ukubonakala komoya. Sebenzisa isomisi esomileyo sokomisa iinwele zakho kwaye usinike ivolumu, emva koko usebenzise imveliso oyithandayo yokuchaza kunye nokugcina ubume kwisitayile sakho. Ukudlala ngokukhanya kunye nemveliso ukuze ungasidambisi eso sitayile sikhutshiweyo.
Njengenye yeenwele ezithandwa kakhulu ezinamacala amafutshane kunye neenwele ezinde ngaphezulu, izitayile zangasemva ezityibilikileyo zingamadoda kwaye zinobunkunkqele. Izinwele ezibuyayo ezibuyiselwe umva zihlala zihlanjululwe ngakumbi kwaye zinokuba zezona ndawo zilungileyo zeshishini iinwele zamadoda zokunxiba emsebenzini.
Ukuba ufuna ulondolozo olusezantsi ujonge iinwele ezinde eziphakathi, ukubuyela umva kulula ukufumana kwaye kulula ukuba nesitayile. Ukugqiba okumanzi okumanzi, sebenzisa ukubambelela okuphezulu ngomnwe ocwebezelayo ukugcina iinwele zakho ziphinde zabuyela umva imini yonke. Abafana abaneenwele ezingqindilili, ezi-wavy okanye ezigobileyo baya kufuna ukufaka imveliso eyomeleleyo yeenwele.
Icandelo elisecaleni kukucheba kweenwele zakudala eziza kuhlala zichukumisa. Ukuba ukhetha uguqulelo lwanamhlanje, cela umchebi wakho kwicala elinzima kwaye uya kucheba inwele yakho esebenzisa iziqhobosho okanye isitshetshe ngqo.
Oku kusikwa kufanelekile kumadoda ajonge ukongeza umda ocacileyo kwisitayile sabo. Ungasidibanisa esi sitayile nge-low, mid, okanye high bald fade emacaleni enwele yeklasi yobude obuphakathi.
Izinto eziguquguqukayo kunye nokubukeka okuhle kwabafana bayo yonke iminyaka, ikama elingaphezulu lenze ukubuya okukhulu kumaxesha akutshanje. Njengeenwele ezahluliweyo, ikama ngaphezulu ibhalwe ngokutshayela iinwele kwelinye icala. Inkulu nge-wavy, eshinyeneyo, kunye neenwele ezide eziphakathi ngokuthe tye, ikama ngaphezulu kweenwele kulula ukuzigcina kunye nesitayile.
Unokubonisa ukuphela, i-undercut, okanye i-tapered cut emacaleni ukuze uncedise isitayela eside ngaphezulu. Ukujonga, sebenza pomade okanye udongwe kwizinwele zakho uze udibanise iinwele zakho entloko. Yiyeke ikhululeke kwaye ixhomeke kwicala elinye ukuze ufumane i-vibe elula.
Ikwabizwa ngokuba yintloko ebhedini okanye ukubonakala okungafunekiyo, iinwele ezingcolileyo konke malunga nokujongwa njengokungaqhelekanga kunye nokungazami nokubonakala ngokungakhathali okanye ukungakhathali. Idume ngabaselula, abafana beekholeji kunye nabafana abancinci, izitayile ezithandwayo zilulutsha kwaye ziyonwabisa.
Ukuvelisa ukujonga okufanelekileyo, uzakufuna ubude obuphakathi ukuya kwiinwele ezinde kunye nemveliso yokuthayipha esemgangathweni. Kweminye, i-shaggy top iza ngokulula emva kweenwele zokoma kwetawuli; abanye kuya kufuneka bafake i-cream yokukhanya, ipomade okanye i-putty yendlela ecocekileyo, ebunjiweyo.
Icandelo eliphakathi ngokwendalo libolekisa kubude obude obuphakathi kwaye belikhula ekuthandeni. Ngokufana neenwele eziphefumlelweyo ezingama-90s, iinwele eziphakathi zikhangeleka zibhetele xa iinwele ngaphezulu zigcinwa ixesha elide kwaye amacala anciphisiwe amafutshane ukuze andise umahluko.
Nokuba uyaxubha ama-bangs amade umva okanye uvumele imiphetho ixhonywe emacaleni iya kuxhomekeka kukhetho lwakho. Abafana baya kufuna i-shampoo ephezulu kunye ne-conditioner kunye nemveliso yeenwele ezilula ukukhulisa ngokupheleleyo kunye nokunciphisa i-frizz.
Ukuba ufuna i-hairstyle enesibindi kunye ne-edgy, i-faux hawk ihlala ikhethwayo. Ngokwesiko inxulunyaniswa nezitayile zepunk, ii-faux hawks ziye zaqheleka. Ukuqaqambisa ukuphakama kunye nomphezulu omde, uninzi lwabafana ludibanisa i-fohawk kunye ne-fade haircut.
Ukubonelela ngokuguquguquka kunye nokuqaqamba, unokugungqa ikama ngaphezulu okanye uyeke ngemini kunye nesitayile sefeksi ebusuku. Uya kudinga imveliso eyomeleleyo ukugcina i-spikes inyukele embindini wentloko, kodwa ukujonga kokugqibela kuya kulunga nomzamo.
Ngobume obufanelekileyo, ukuphakama kunye nevolumu, ipompadour inokuba yindlela entle yokunxiba isitayile seenwele zakho eziphakathi. Ipompadour yanamhlanje iyanqunyulwa nge-taper fade okanye i-undercut emacaleni nasemva ukwenza i-fresh take kwi-classic look. Ukuhombisa ipompadour ende, kuya kufuneka usebenzise ipomade eyomeleleyo kwaye uzomise iinwele zakho endaweni.
I-mohawk yimbonakalo eyoyikekayo kwabo bafuna ukwamkela isitayile esikhethekileyo. Ngelixa uhlala uzama i-mohawk enamacala achetyiweyo, i-mohawk fade yanamhlanje ayimangalisi kwaye ixhaphake kakhulu. I-Trendy kunye ne-badass, i-mohawk yeenwele yingxelo iyodwa. Faka isicelo se-pomade kwizinwele ezomileyo ukuze ugqitywe ngombala oya kubonakala kakuhle.
Umphetho yinto iinwele zamadoda ezilula zokutsala ngeenwele eziphakathi. Ikwabizwa ngokuba yi-bangs, inwele enezinwele ifuna iinwele ezinde ngaphambili kunye neenwele ezimfutshane kancinci emacaleni nasemva.
Xa ukhangela oku kujongeka, uya kufuna ukutshayela ii-bangs zakho ecaleni kwaye ushiye isitayile sikhululekile kwaye sikhululekile. Ukungabikho-mva kwaye kulula ukuyigcina, sebenzisa imveliso yokubamba ukukhanya yokuhamba, umzimba kunye nokuthungwa.
Iinwele ezinde zamagxa zilungile kumadoda aneenwele ezinde ezingqindilili ezifuna inkangeleko eyahlukileyo nefashoni. Ukusuka kwibhanti yendoda ukuya kwi-ponytail, unokuzama ngeendlela ezahlukeneyo okanye ugcine iinwele zakho zilayishwe, zendalo kwaye zihamba.
Xa uthambisa, sebenzisa imveliso efana netyuwa yolwandle oluya kunika ubume beenwele zakho ngelixa unikezela ngolawulo. Ngelixa kungathatha ixesha ukukhula iinwele zakho ixesha elide, usazodinga ukunciphisa iingcebiso rhoqo ukunqanda ukwahlula-hlula. Qiniseka ukuba usebenzisa ishampu ekumgangatho ophezulu ukucoca, ukucoca amanzi, kunye nokondla iinwele zakho ukuze zikhanyise, zibe nokukhanya okunempilo.
Iinwele eziDibeneyo eziPhakathi
Iinwele eziphakathi ubude zisebenza kakuhle neenwele ezishinyeneyo, zivumela amadoda ukuba enze nayo nayiphi na imbonakalo ayifunayo. Ukusuka ekusikeni okungaqhelekanga ukuya kwisitayile seshishini, thetha nenwele yakho malunga neenwele ezingcono zamadoda zobuso bakho, uhlobo lweenwele, kunye neemfuno zesitayile. Nokuba uyayithanda ikama ngaphezulu, ikhweyitha, ubuyise umva, okanye indawo esembindini, sicebisa ukuba uzame ngazo zonke ezona zinto zipholileyo.
Uyilo lwe tattoo kwimikhono yamadoda
Iinwele eziPhakathi eziLungileyo
Izinwele ezithe tye zinika amadoda ithuba lokuzama zonke ezi iinwele eziphakathi ngokulula. Uninzi lwabafana abanezinwele eziphakathi ezithe tye bangadlala ngeendlela ezahlukeneyo. Unokubonakala uyinkwenkwe entle enobuso obucocekileyo okanye ugungqise ialpha eyindoda eyindoda eneentshebe ezirhabaxa.
Njengoko ukhula iinwele zakho, jolisa kwiinwele eziphakathi eziza kuthatha ithuba lokukhiya kwakho kwendalo kunye nokubonelela ngomzimba, ukuhamba, kunye nokuhamba.
Amadoda aBude obuPhakathi beenwele
I-undercut kukucheba kwamadoda apho umva kunye namacala asikiweyo amafutshane kunye nobude bonke. Ngokungafaniyo nesiphelo apho usiko ludityanisiwe njengoko usiya phezulu entloko, iinwele ezingaphantsi zinika umahluko kumbonakalo omangalisayo.
Njengenye yeendlela ezithandwa kakhulu zokusika iinwele zamadoda, i-undercuts ijongeka intle ngezitayile zobude obuphakathi ngaphezulu. Soloko ubhetyebhetye kwaye unemfashini, cela umchebi wakho kumacala amafutshane kwaye ushiye iinwele zakho ngaphezulu ngaphezulu ukuze zikunike inkululeko yokufumana zonke iintlobo zezitayile.
Ukuphela okuphantsi isitayile sokucheba kwabafana abafuna ukusikwa abanokukunxiba naphi na. Ukufiphala okuphantsi kuqala endlebeni nakwinwele, thawuza kancinci amacala kunye nomva, kwaye ujongeke kumadoda aqeqeshiweyo.
Buza i-barber yakho yesikhumba esiphantsi ukuze ungeze i-flair kwi-trim yakho. Ayisiyonto iphawuleka njengokuphela okuphezulu kodwa iseyila maxesha kwaye intle, isiphelo esisezantsi siyintandokazi yokucheba iinwele.
Ukuphela okuphakathi kukusikwa okugqibeleleyo kwabafana abafuna ulonwabo oluphakathi phakathi kokuphela kunye nokuphakama okuphezulu. I-Edgy kwaye igudile kodwa iseklasini, iinwele eziphakathi eziphakathi ziqala embindini wamacala kwaye zibuyele ekwenzeni umahluko.
Xa kuziwa ekugxininiseni iinwele zakho ezinde, i-bald mid fade inokuba yeyona nto ifanelekileyo.
Ukuphela okuphezulu kukucheba iinwele ngesibindi okunokwenza kwangoko ukuba naziphi na iinwele zivelele kwisihlwele. Ukuqala kufutshane nomphezulu wentloko kwiitempile, ukusika okuphezulu okuphelayo kunikezela ngenkangeleko ebukhali, yolondolozo olusezantsi.
Unokwenza ngokusesikweni ukuba ufuna ukuba iinwele ziphele. I-bald okanye ulusu luphele luchetywa kancinci ukuya entlonzeni ezantsi. Oku kuphela kuya kubalaselisa ubude bakho obuphakathi ukuya kwizinwele ezinde ngaphezulu.
ikama phezu kwetaper fade